“Waa meel-ka-dhac wayn in Xisbigii uu Aabbahay aasaasay laga yidhaahdo Geeridiisii faa’iido ayay ahayd” | Xarshinonline News
“Waa meel-ka-dhac wayn in Xisbigii uu Aabbahay aasaasay laga yidhaahdo Geeridiisii faa’iido ayay ahayd”
Dubai,(NNN)- Cali Maxamed I. Cigaal oo ka mid ah Caruurta uu dhalay Allaha u naxariistee Madaxweynihii hore ee Somaliland Marxuum Maxamed X. Ibraahim Cigaal, ayaa ka hadlay hadallo ka soo yeedhay masuuliyiin ka tirsan Xisbiga UDUB ee talada haya, waxaanu baaq u jeediyay shacabweynaha reer Somaliland. isla markaana wuxuu ka warbixiyay mabda’ooda Qoys ahaan ee siyaasadda dalka.
Cali Maxamed Ibraahim oo isaga oo ku sugan magaalada Dubai ee Imaaraadka Carabta, Khadka Telefoonka kula xidhiidhay Wargeyska Ogaal, ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay War uu sheegay in uu ka soo yeedhay masuul ka tirsan Xukuumadda iyo Xoghayaha guud ee Xisbiga UDUB Jaamac Yaasiin Faarax, waxaanu shacabweynaha ugu baaqay in ay ka fiirsadaan Codkooda. “Maan jeclayn inaan waqtigan doorashada ee xasaasiga ah soo dhex galo. Laakiin waxa igu kalifay arrinta aan warbaahinta ku arkay. Xisbigii marxuumku aasaasay ee UDUB nimankii masuuliyiinta ka ahaa iyagoo dhac-dhacyo (deelqaaf) hore aanu ugu dulqaadanay oo aanu ka aamusnay, ayaa dhacday in maantana la yidhaahdo dhimashadiisii faa’iido ayey u ahayd Somaliland oo Daahir Rayaale ayey keentay. Waa meel-ka-dhac wayn in Xisbigii uu aasaasay ee ay ahayd lagu maamuuso oo lagu sharfo, sidaa lagaga yidhaahdo, iyagoo doorasho ku jira oo doonaya inay dadka soo jiitaan oo ay mar labaad ay xukunka qabtaan. Tii hore ee Ninka Xoghayaha guud ka ah UDUB uu yidhi ee ahayd, dagaalkii sokeeyaha ayuu ka dambeeyey (Marxuum Cigaal), waanu ka aamusnay oo waanu iska dhego-tirnay, baanayaal hore oo fara badan oo madaxweynaha laftiisu noo qaaday iyo ixtiraam darrada aanu ku haysanay xisbiga UDUB ayaa iyana jiray.” Ayuu yidhi Cali Maxamed, waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Waxaas oo dhan waxaanu u samaynay danta Somaliland, waayo sidii aan berigii uu Aabbahay dhintayba u sheegay, dhaxalka anaga iyo Somaliland-ba uu nooga tagay waxay ahayd, Dimuqraadiyadda, Nabadgelyada iyo nidaamka dawladnimo uu dhisay. In taas la bur buriyo ama fadqalo lagu sameeyo anagu ma ogolin, in magaciisii la ceebeeyana ma ogolin.”
Cali Maxamed Ibraahim waxa uu shacabka ugu baaqay in cid kasta oo maamuuska Marxuum Cigaal ku taageeri jirtay Xisbiga UDUB ay ka fiirsadaan taageeradooda. “Waxaan leeyahay, qofkii UDUB ku taageerayey marxuunkii aasaasay ee Maxamed X. Ibraahim Cigaal, anagoo reerkiisii ah, yaan taas la idinku indho-sarcaadin, haddii aanu isagiina ixtiraam ku lahayn, dadkiisiina ixtiraam ku lahayn.” Ayuu yidhi Cali.
Mar uu ka hadlayay qaar ka mid ah waxqabadyadii Dawladdii Marxuum Cigaal, ayaa waxa uu yidhi, “Marxuumkii sagaal sano ayuu wadanka taladiisa hayey, sagaalkaa sano wuxuu qabtay dadkoo dhami way wada ogyihiin, inuu beelihii hubka ka dhigay, inuu Ciidankii qaran sameeyey, inuu Booliska sameeyey, inuu Wasaaradaha sameeyey, inuu Maxkamaddaha sameeyey, inuu dagaalkii sokeeye nabadgelyo ku dhameeyey, inuu haykalkaa taagan ee aynu maanta ku caana-maalayno uu sagaalkaa sano dhisay waa la wada ogyahay oo taariikhday ku jirtaa.”
Cali waxa uu sheegay in ay qoys ahaan taageeradii kala noqdeen Xisbiga talada haya ee UDUB oo uu Marxuum Cigaal aasaasay, isla markaana aanay ilaa hadda taageerin Xisbina. Waxaanu baaq u jeediyay dadweynaha reer Somaliland. “Xisbiga (UDUB) dadkan imika maamulaya waanu kala noqonay taageeradii. Laakiin mustaqbalka illaahay baa og, waayo aflagaadan u dulqaadan kari mayno, markaa dadka reer Somaliland ee walaalahay ah waxaan kula talinayaa codkiina maanta u fiirsada cidda aad siinaysaan, anigu saddexda xisbi midna kuma jiro UDUB-na waanigaa sheegay labada kalena midna kuma jiro. Khudbadahan ay akhriyayaan waa waraysi ay sii galayaan uu nin walba leeyahay aniga I doorta, qofkaad dooranaysaan waa ninka aad u diranaysaan inuu Geeliina idiin raaco. Markaa ninka aad u diranaysaan inuu Geeliina idiin raaco, codkiina ka fiirsada.” Ayuu yidhi Cali, waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Sagaal sanadood marxuumkii waxa uu qabtay waanigaa sheegay, siddeed sanadood ay imika Xukuumaddani jirtay kula xisaabtama waxay qabatay oo ha ina tusto. Nidaamkii jiray ayaa hoos u sii dhacaya, siddeeda hal sanno ayuu dheer yahay Marxuum Cigaal intuu xukunka hayey ina Rayaale wakhtiga uu hayay. Isbarbar-dhig ku sameeya oo la xisaabtama dawladan, nimankan kalena la xisaabtama waxay soo wadaan oo codkiina maanta yaan la idinka iibsanin ee codkiina ku meel mariya ciddaad jeceshihiin.”
← Guddoomiyaha UCID oo dadweynihii Rayaale Codka siiyay ugu baaqay inay Toobbad keenaan oo Illaahay Cafis weydiistaan
Maxay TELESOM ku hanatay horyaalka Isgaadhsiinta Somaliland? →